Gudida diiwaan Gelinta oo Baaq u diray Axsaabta, kana hadlay habka loo kala saarayo | Somaliland.Org
Gudida diiwaan Gelinta oo Baaq u diray Axsaabta, kana hadlay habka loo kala saarayo
November 11, 2012	Hargeysa (Somalialnd.Org)- Gudida Diiwaan gelinta Ururadda siyaasadda iyo ansixinta Axsaabta Somaliland, ayaa maanta mar kale bayaamisay qaabka sharci ahaan loo kala saarayo ururadda iyo xisbiyadda ku hirddamaya doorashada deegaanka ee lagu wado inay dalka ka qabsoonto 28-ka Bishan.
Gudida diiwaan gelintu waxa kale oo ay ugu baaqeen asxaabta siyaasadda iyo Taageereyaashoodu inay dhawraan anshaxa suuban iyo xeerarka doorashadda.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed uu Afhayeenka Gudida diiwaan gelintu ka jeediyay shir jaraa’id oo uu ku qabtay xaruntooda magaaladda Hargeysa, waxaanu u dhignaa war-murtiyeedkaasi sidan:-
“Iyadoo guddida diwaan gelinta asxaabta iyo ururada siyaasadu ay hore u wada saxeexeen habraaca qodobka 6-aad ee xeerka No14 Iyada oo guddida diwaan gelintu ay u baxayso kor meer gobolada dalka ah
Waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 11/11/2012 halkan idiinku soo gudbinaynaa:-
1-Habraaca qodobka 6-aad ee xeer No.14/2011 oo ka hadlaya habka loo kala reebayo asxaabta iyo ururada siyaasada, habkaas oo la wada saxeexay Eeg:lifaaqa qoraalka ee qodobka 6-aad ee xeer no.14/2011.
2. In xisbiyada,ururada siyaasada iyo dadweynaha Somaliland ay ilaaliyaan nabad galyada dalka qof walibana uu gaarkiisa xil isku saaro.
3. In xisbiyada iyo ururada siyaasada iyo taageerayaashoodu ay ilaaliyaan xeerarka dalka sida dastuurka qaranka,xeer No 20 iyo N0 14aad, iyo anshaxa suuban,dhaqanka wanaagsan iyo tartanka nadiifta ah.
Qodobka 6aad:Hanaanka Kala Reebista ururada iyo xisbiyada.
Sida uu dhigayo qodobka 6aad ee xeerka nidaamku,ururada/asxaabtu waxay ku heshiiyeen in habka kala saarista loo raaco sidan:
Siyaasada xeerkan lagu abuuray ee uu ku fadhiyaa waa inuu gobolada dalka ku leeyahay xisbi/urur kastaa taageerayaal mug leh oo fadhiya boqolyada si ay noqdaan sadexda xisbi qaran ee soo baxa, oo ka wakiil ah dhamaan gobolada Somaliland.
F.1-aad wuxuu leeyahay isagoo saldhigiiisu yahay boqolayda sadex urur/xisbi ee gaadha lixda gobol 20% ayey guddidu u aqoonsanaysaa xisbi qaran,lana siinayaa shahaado xisbi qaran.
F.2aad-hadii hal xisbi/urur uu gaadho 20% waxay guddidu u aqoonsanaysaa xisbi qaran isaga iyo labada xisbi/urur ee ku xiga kala saraynta isku gaynta boqolayda gobol kasta gaarkiisa.
F.3aad-hadii ay is leekaadaan laba xisbi/urur ama ka badan isu gaynta kala saraynta boqolayda gobol kasta gaarkiisa waxa lagu kala saarayaa sida ay u kala badan yihiin codadka guud ee dalka.
F4aad- hadii ururada/xisbiyada siyaasada midna gaadhi waayo 20% waxay guddidu u aqoonsanaysaa xisbiyo qaran sadexda xisbi/urur ee ugu tirada badan kala saraynta codadka boqolayada gobol kasta gaarkiisa.
Qodobka 10aad: Isticmaalida Boqolayda
Hanaanka kala saraynta ururada/asxaabta laguma isticmaali karo isku darka boqolayda(adding percentage), waxaana reeban in qaab xisaabeedka kala saraynta lagu saleeyo isku darka guud eee boqolayda gobolada dalka”
Previous PostMadaxweynaha oo kormeer ku soo maray xarumo ku yaala Burco, mashaariicna xadhiga laga jarayNext PostWasiir Ku xigeenka Amniga oo Kulan La yeeshay Cuqaasha Gobolka Maroodi-jeex	Blog